Malawi : Hevitra nateraky ny fiverenan’ny filoha taloha hanao pôlitika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Mey 2008 11:20 GMT
Vao tsy ela izay, no nanatanterahan'ny antoko [eo amin'ny fitondrana] UDF [United Democratic Front ] ny fihaonambeny sy ny nifidianany ny filoha taloha Bakili Muluzi ho kandidan-dry zareo amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay hotanterahaina amin'ny taona ho avy any Malawi . Ny filoha lefitry Malawi, ny Dr Cassim Chilumpha izay ambany fiampangana ho mpamadika no mba mpifaninana hany niatrika taminy. Austin Madinga izay mpiblaogy monina any Lilongwe dia mihevitra fa diso ny fototry ny fanapahan-kevitra izay nanosika an'i Muluzi hiverina hanao pôlitika. Tsahivin'i Madinga ny tafatafa nifanaovan'ny filoha Muluzi tamin'ny BBC [haino aman-jery mivoy vaovao Anglisy] ho fampidirany ny lahatsorany :
When asked why he would like to return as Malawi's president he said because Bingu wa Mutharika (Muluzi's successor) had dumped the party after he was elected president and as such he needed to return the UDF to power!
This type of reasoning to me is not only gravely flawed but also defied all logic. Mr Muluzi needs to be reminded that people do not ascend to power to simply punish others or for the sake of being a ruling party. They are placed in positions of authority to serve the people and going by Muluzi's past record, that is not likely to feature high on his agenda.
“Rehefa nanontaniana izy hoe nahoana no manam-paniriana ny hiverina ho filoham-pirenena any Malawi ny tenany, dia navaliny fa taorian'ny naha-voafidy an'i Bingu wa Mutharika (filoham-pirenena nisolo toerana an'i de Muluzi tamin'ny taona 2004, ary nandao ny UDF ka nanorina antoko vaovao DPP [Democratic Progressive Party] tamin'ny 2005) dia nosimbany ny antoko ka ilaina ny famerenana ny antoko UDF amin'ny tanjaka nananany taloha !”
Tsy vitan'ny hoe, mivilana tanteraka fa tsy mitombona mihitsy hoy aho ny fomba fihevitra toy izany. Tokony ampatsiahivina an'ingahy Muluzi fa tsy ny hanome famaizana olon-kafa fotsiny na koa [famerenana ny] tanjak'izay antoko pôlitika [reraka] no iakaran'ny olona eo amin'ny fitondrana. Ny antony anomezana fahefana azy dia mba ahafahany manompo ny vahoaka, ary raha tarafina amin'izay efa traikefan'ingahy Muluzi dia toa tsy ao anatin'ireo vain-doha-draharahany izany zavatra izany.”
Nanokatra blaogy vao herinandro vitsy izay i Boniface Dulani izay sady mpanaraka vaovao pôlitika raindahiny no mpampianatra ao amin'ny Anjerimanontolon'i Malawi. Ny lahatsorany vao tsy ela dia nampitondrainy ny lohateny hoe Momba ny fihaonamben'ny antoko UDF sy izay antony tsy hifidianako an'i Muluzi. Tsikerainy ny fanolorana an'i Muluzi ho kandida sy ny fihaonamben'ny UDF izay ampitahainy amin'ny vazivazy satria na ireo solontena izay nanatrika izany fivoriana izany aza dia tsy nisy nofidiana tamin'ny fomba demôkratika akory :
“Eny e, na dia atao aza hoe resy lahatra aho fa niasa tsara i Muluzi nandritra ireo folo taona voalohany naha filoham-pirenena azy (sady ambarako mialoha fa tsy ho zavatra mora ny handresy lahatra ahy mikasika izany), dia tsy eken'ny saiko tsotra izao ny mieritreritra fa fa tsy misy olon-kafa mahavita azy hafa avy ao amin'ny antoko UDF izay afaka hitarika azy amin'ny fifidianana manaraka. Ny ahafantarantsika fa hahavita azy i Muluzi dia satria notolotra azy ny loha-laharana [fa tsy mba nisy adihevitra sy fifaninanana akory]. Izany dia mampiharihary fa anivon'ny antoko UDF sy eo amin'ny firenena amin'ny ankapobeany dia [tena] misy ireo olona izay manana traikefa ho mpitondra fa ny toerana no sarotra vao azo. Raha tena manana izay maha-izy azy anivon'ny antoko UDF tokoa i Muluzi dia afaka manolotsaina ireo kandida hafa izay hirotsaka izy, fa tsy ny mifikitra sy mikiry ho kandida izy tenany [toy izay ataony ankehitriny].”
Andao hiova lohahevitra indray ka hiresaka zavatra hafa mihitsy mikasika an'ny Malawi. Bennet Kankuzi izay mpiblaogy monina any Botswana dia nanokatra blaogy vaovao nampitondrainy ny lohateny hoe Tiako I Malawi [I Love Malawi fa tsy TIM tsy akory] izay nafantony ho fanapariahana sary mikasika an'i Malawi izay mitondra ny anaram-bosotra hoe “fo mivaivain'i Afrika” [Warm Heart of Africa]. Ka raha misy amintsika liana ny hahalala bebe kokoa momba ny hakanton'i Malawi, dia indro blaogy ahafahanareo manaraka vaovao hafa ankoatr'izay resaka pôlitika sy toekarena [izay efa mankalao]. Io sary manaraka ambany io dia ahitana lemaka ambolena dite any amin'ny faritra Atsimon'ny Malawi: